‘बसुधैव कुटुम्बकम्’को नारा प्रगति बिरोधी– धर्म परिवर्तन गरी प्रभाव बढाउने प्रगतिशील ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 04:06:17
जापानी समय : 07:21:17
‘बसुधैव कुटुम्बकम्’को नारा प्रगति बिरोधी– धर्म परिवर्तन गरी प्रभाव बढाउने प्रगतिशील ?
6 October, 2019 23:30 | बिचार | comments | 27450 Views
दशैं लगायतका चाडपर्व आएपछि वामपन्थी नेता, विश्लेषक र गैर हिन्दुहरु यसको रुपान्तरण हुनुपर्छ, दशैं प्रगतिशील भएन भन्ने आरोप लगाउँछन् । दशैं हुनेखानेको पर्व हो, सामन्ती संस्कृतिको द्योतक हो भन्ने गैरहिन्दुहरुको पनि भनाई छ तर वास्तविकता यो पनि हैन, दशैं केवल हिन्दुको मात्र पर्व हैन सम्पूर्ण नेपालीको पर्व हो ।
दशैं केवल मानिसहरुले मनोरञ्जन गर्ने पर्व मात्र हैन संस्कृति, स्नेह, मेलमिलाप र प्रकृतिसंग सम्बन्धित छ । यति मात्र हैन यो पर्व मातृशक्तिको महिमाको गुणगान गाउने, मातृशक्तिप्रति नतमस्तक भएर नौदिनसम्म आराधना गर्ने पर्व हो । आजभोलि महिला समानताको नारा घन्काउनेहरुले दशैंले स्थापित गरेको मान्यता मात्र कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने हो भने नेपाल संसारमै सबभन्दा उत्कृष्ट मुलुक ठहरिनेछ ।
तर दशैं लगायतका पर्वहरु रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै वामपन्थी नेता तथा विश्लेषकहरु धुमधामसंग दशैं मनाउँछन् । उनीहरु हिन्दु धर्म संस्कृतिले समाज विकासमा अबरोध पुर्यायो भन्दै हिन्दु धर्म त्याग्न खुला आव्हान गर्छन् । जातीय भेदभाव हिन्दु धर्मले गरेको भन्दै उकजनता पूर्व प्रधानमन्त्रीले त कथित दलित जातिलाई किन हिन्दुधर्म मान्नुहून्छ भन्दै धर्म त्याग्न खुला आव्हान गरे । के यसरी देश विकास हुन्छ त ? धर्म, संस्कृति, संस्कार र रितीरिवाज रुपान्तरण वा परिवर्तन गरेर कुन देशले विकास गरेको छ ? देखाइदिनुपर्यो ।
हिन्दु धर्मले अनुप्राणित परिवारमा जन्मने, त्यही धर्म अनुसार नामाकरण, शिक्षा, विवाह सबै गर्ने अनि जान्नेसुन्ने भएपछि अरुको लहलहैमा लागेर केही धनका लागि धर्म परिवर्तन गरेर हिन्दु धर्ममाथ विषवमन गर्नेहरु यही धर्मको आडमा सामाजिक कामका लागि लगाइएको महापुराण वा महायज्ञमा दुबोको मालामा बेहुला झैं सजिएर हिन्दु धर्मको गुणगान गाउन भने बिर्सदैनन् । तैपनि उनीहरु भन्छन् हिन्दु धर्मले विकासमा अबरोध गर्यो !
हिन्दुधर्म कसरी विकास बिरोधी भयो ? इतिहास साक्षी छ पूर्वी सभ्यता नै संसारको पहिलो सभ्यता हो ? साम्यवादको सुरुवात ५ हजार वर्षअघि नै सुरु भएको थियो । महाभारतकालिन समय नै साम्यवादी थियो । रामायणकाल सबभन्दा सफल लोकतन्त्र थियो । जनताको झुठा आरोपलाई पनि स्वीकारेर राजा रामले रानी सीता त्यागेको दृष्टान्त लोकमतको सम्मान हो ? आज भ्रष्टाचारले डुङडुङ्ती गनाएर जनताले मात्र हैन अदालतले संवैधानिका निकायले नै दोषी देखाए पनि कारबाहीको कुनै गुञ्जायस छैन । हिन्दु धर्म–संस्कृतिमा लोकतन्त्र–साम्यवाद थियो भने अहिले पश्चिमा लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा कस्तो छ ? शक्तिको आडमा महिला बलात्कार गर्नेहरु कानुनबाट बच्न शक्तिको प्रयोग गर्छन् । अनि उनीहरु नै भन्छन् हिन्दु धर्म विकासबिरोधी छ ।
नेताहरु भन्छन्– हिन्दु धर्म प्रगतिशील भएन अरु धर्मजस्तो । उनीहरुले भनिदिनुपर्यो इसाई धर्मले कस्तो विकास गर्यो ? के भौतिक विकास मात्रै सबथोक हो ? मसाई धर्मले के सिर्जना गर्‍यो ? इसाई धर्मावलम्बीहरु एक हातमा रोटी र अर्को हातमा बन्दुक बोकेर धर्म परिवर्तन गराउँदै हिंड्छन् । आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि उनीहरु आतंकवादी जनमाउँछनु, उसलाई पालन–पोषण गर्छन् र अन्ततः उसैलाई सिध्याउँछन् । इराकका सद्दाम हुसेन हुन् वा आतंकवादी नेता ओसामा विन लादेन– अमेरिकी उत्पादन हुन् र अन्ततः अमेरिकाकै लागि खतरा बने र अमेरिकाले आज इराक र अफगानिस्तानमा कहिल्यै ननिभ्ने आगो सल्काएको छ ।
नेताहरुले भनेजस्तो प्रगतिशीलता यही हो ? ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को मान्यता राख्ने हिन्दु धर्म विकास बिरोधी अनि अर्कोलाई मारेर आफू बाँच भन्ने अरु धर्म प्रगतिशील देख्ने नेता, विद्वान र विश्लेषकहरुको विवेवको बिर्को डलरले ढाकिएपछि योभन्दा बढी के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?